संसद् सहज भएपछि तेजाबसम्बन्धी अध्यादेश फेरि सक्रिय - मन्त्री उमा रेग्मी Canada Nepal
Oct 25 2021 | २०७८, कार्तिक ८गते
२०७८, कार्तिक ८गते
नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भए युवराज अधिकारी
राष्ट्र बैंकले गर्‍यो ३ तीन बैंक र पाँच फाइनान्सलाई कारबाही
सैफ र रानी १२ वर्षपछि एकसाथ देखिए, 'बन्टी और बबली २' को रमाइलो ट्रेलर सार्वजनिक
आफ्नो गृहजिल्लाको विकासबारे किन झुट बोल्छन् ओली ?
नेपालमा एकैदिन ७ सय ७६ जनामा कोरोना संक्रमण, सक्रिय संक्रमित कति ?
नेप्सेमा हरियाली, ८७ दशमलव ६३ अंकको वृद्धि
प्रधानन्यायाधीश भेट्ने निष्कर्षसहित सकियो न्यायाधीशहरूको बैठक
संसद् सहज भएपछि तेजाबसम्बन्धी अध्यादेश फेरि सक्रिय - मन्त्री उमा रेग्मी
क्यानाडा नेपाल आश्विन २६ २०७८
चितवन - महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले संसद सहज भएपछि तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन गर्ने अध्यादेश सक्रिय हुने बताएकी छन् । मन्त्री नियुक्त भएपछि मंगलबार पहिलो पटक गृहजिल्ला आएकी रेग्मीले पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै एमालेका कारण अध्यादेश निश्क्रिय भएको आरोप लगाइन् ।
महिलामाथि तेजाब आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि केपी ओलीको सरकारले यो अध्यादेश जारी गरेको थियो । ‘अध्यादेश रद्द भएको होइन, एमालेले सदन घेरिरहेको छ । सदन सहज छैन । त्यसैले गर्दा पारित गर्न नसकिएको हो । अलिकति सदन सहज हुने बित्तिकै सरकारले यो अध्यादेशलाई सक्रिय बनाउँछ’, उनले भनिन् ।
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन गर्ने अध्यादेश र यौन हिंसाविरुद्धको केहि ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश निश्क्रिय भएको हो । केपी ओलीको सरकारले जारी गरेको उक्त अध्यादेश संसदबाट समयमै पारित नभएपछि अध्यादेश निश्क्रिय भएको हो । अध्यादेशमा पीडकलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो ।
फरक प्रसंगमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी नेतृ समेत रहेकी रेग्मीले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको जोडबोलमै पार्टी सभापतिले सरकारमा जाने निर्णय गरेको बताइन् । अधिबेशन लागेको भएर वरिष्ठ नेता पौडेलले अहिले आएर पार्टी सभापतिमा सत्ताकोे लोभ देखेको उनले बताइन् ।
उद्योग मन्त्रीमा गजेन्द्र हमाललाई गरेको नियुक्तिको विषयमा पनि उनले पार्टी सभापति देउवाको बचाउ गरिन् । हमाल कांग्रेसकै पुराना नेता भएकाले छ महिनाका लागि नियुक्त गरिएको र त्यसमा कुनै सेटिङ नभएको दाबी गरिन् । यद्यपी आलोचना भएपछि हमालले मन्त्रीबाट राजिनामा दिएर स्वाभिमान देखाएको बताइन् ।
गृह जिल्ला आएकी मन्त्री रेग्मीलाई कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुले बाजागाजासहित धुमधामसँग स्वागत गरेका थिए । मन्त्रीलाई स्वागत गर्न विमानस्थलभित्रै भिड लागेको थियो । नेता कार्यकर्ताहरुले पुष्प गुच्छा र खादा ओढाएर स्वागत गरेका हुन् । न्युज कारखाना
आश्विन २६, २०७८ मंगलवार २०:२०:२२ बजे : प्रकाशित
# उमा रेग्मी
सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठक स्थगित, १४ न्यायाधीशको छुट्टै बैठक
काठमाडौं - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोमबारका लागि बोलाएको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठक स्थगित भएको छ । सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशले बहिष्कार गरेकाले फुलकोर्ट बैठक बस्न नसकेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो कार्यक्षमता र न्यायालयका विषयमा उठेका सबै विषय फुलकोर्टमै छलफल हुने बताएका थिए । तर, १४ जना न्यायाधीशले बहिष्कार गरेकाले फुलकोर्ट बस्न नसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।
अहिले १४ न्यायाधीशको छुट्टै बैठक बसिरहेको छ । बैठकले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिने बुझिएको छ । यस्तै, प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यक्षमता र योग्यताका विषयमा छलफल गर्न नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको बैठक पनि बसिरहेको छ ।न्युज कारखाना
कार्तिक ८, २०७८ सोमवार १३:०१:१४ बजे : प्रकाशित
प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाए मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बोलाएका छन् । बैठक सरकारी निवास बालुवाटारमा अपरान्ह ४ बजे बस्ने बताइएको छ ।
बैठकमा बाढी–पहिरो पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र नियमित काम कारबाहीका बिषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश १ र सुदूरपश्चिमका बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरी काठमाडौं फर्किएका थिए ।
कार्तिक ८, २०७८ सोमवार १४:१४:५० बजे : प्रकाशित
महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ - रामचन्द्र पौडेल
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको आसन्न १४औँ महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् ।
कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशन मंसिर ९ गतेदेखि मंसिर १३ गतेसम्मा गर्ने तयारी गरेको छ । यसैबीच नेता पौडेलले निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले निर्धारित समयमा हुन नसके समय थप गर्ने सीमा नै नरहेकाले कुनै पनि हालतमा निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफूले निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न बारम्बार सुझाव दिँदै आएको पनि उनले बताए । पछिल्लो समय कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नका लागि महत्व नदिँदा सबैको ध्यान सत्ता केन्द्रित हुन पुगेको बताए ।
कार्तिक ८, २०७८ सोमवार १४:४४:४६ बजे : प्रकाशित
# रामचन्द्र पौडेल
काठमाडौँ - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेमर जबराको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका सर्वाेच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरूले गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीश राणासँगै छलफल गर्ने भएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालत परिसरमा सोमबार चार घण्टाको छलफलपछि असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू मंगलबार बिहान साढे ११ बजे प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने निष्कर्षसहित बैठकबाट उठेका छन् ।
न्यायिक नेतृत्व र न्यायालयमा हुने गरेका विकृतिबारे लामो छलफल गरे पनि ठोस निष्कर्षमा भने नपुगिएको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्युज कारखानालाई बताए ।
‘लामो छलफल भए पनि त्यस्तो कुनै निष्कर्षमा पुगिएको होइन । हाम्रो सामूहिक सरोकारका विषयमा भोलि (मंगलबार) प्रधानन्यायाधीशसँग समय लिएर भेटेर कुरा राख्ने भन्ने कुरा भएको छ’, न्यायाधीश कार्कीले भने ।
कार्कीले ठोस निष्कर्षमा नपुगेको दाबी गरे पनि न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने वा सार्वजसनिक रूपमा विगतका कमिकमजोरीहरू सच्याउने र भविष्यमा कार्यपालिकासँग सोझो सम्बन्ध छैन भनेर विश्वस्त आधार तयार पार्नुपर्ने निष्कर्षमा छन् ।
न्यायाधीशहरूको बैठकका कारण सर्वाेच्च अदालतमा सबै मुद्दा प्रभावित भएका छन् । न्यायाधीहरूको बैठक सकिए पनि अघोषित इजलास बहिस्कारलाई भने निरन्तरता दिएका छन् । न्यायालयको आन्तरिक विवादका कारण भोलि (मंगलबार)को मुद्दा सुनुवाइसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । न्युज कारखाना
कार्तिक ८, २०७८ सोमवार १४:४७:१३ बजे : प्रकाशित
# प्रधानन्यायाधीश प्रकरण
झापा - पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृहजिल्ला झापा आउँदा विकासबारे सधैँ झुट बोल्छन् । गृहजिल्लाको विकासबारे अपडेट नभएर हुन सक्छ, उनले यस्तो बोलेको । प्रधानमन्त्री हुँदा होस् या प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि, उनी हुलाकी राजमार्गका बारेमा सधैँ चर्चा गर्छन् ।
हुलाकी राजमार्ग बनिसकेको दाबी गर्छन् । सोमबार उनको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत गौरादहमा भएको एक कार्यक्रममा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत प्राविधिक त्रुटिका कारण रतुवामा पुल बन्न नसकेको बताए । उनले कहीँ-कहीँ वन क्षेत्र परेर समस्या भएको बताए । ‘हुलाकी राजमार्ग बनिसक्यो । बीचमा रतुवाको एउटा पुलले गर्दा अड्किएको छ । त्यसका लागि पनि अहिले स्टिमेट भइरहेको छ । त्यो पनि छिट्टै हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘बीचमा केही वन क्षेत्रले रोकिएको छ । त्यो पनि बनाउने प्रयास गर्छौ । दुई दशकदेखि कुरा मात्र भयो । बनेन । हुलाकी राजमार्ग आफैँ बनाउँछौँ भनेर ६ वर्षअघि मैले भनेको थिएँ । केही ठाउँमा पूरा हुन बाँकी छ । त्यो पूरा गर्छौँ ।’
तर, बाँकी ठाउँमा हुलाकी राजमार्ग बनेको उनको दाबी थियो । अवस्था भने त्यस्तो छैन । उनको यो प्रचार झुट हो । हुलाकी राजमार्गमा पर्ने झापा खण्ड गौरीगञ्जदेखि भद्रपुरसम्म बनेको छ । सडकको काम भएको छ । तर, दशकसम्म विभिन्न नदीमा पुल नबन्दा झापाभरि पनि हुलाकी राजमार्गबाट यात्रा गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
कतिपय पुल एमाले निकट ठेकेदारले ठेक्कामा लिएर अलपत्र पारेका छन् । केही पुल दशकपछि काम भइरहेको छ । तर, उनले भनेजस्तो रतुवामा मात्र हुलाकी राजमार्गमा अन्य आधा दर्जन पुलहरू अलपत्र छन् । जसका कारण स्थानीयको यात्रा जोखिमपूर्ण छ । बर्खामा ठूला नदीहरूमा पैसा तिरेर डुंगाबाट नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हिउँदमा पनि बाँसको पुलमा पैसा तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत माई नदीमा पुल निर्माण सुरु गरेको एक दशक नाघ्यो । तर, अहिलेसम्म पुल निर्माण भएको छैन । २०६८ साल ३१ जेठमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन र महादेव खिम्ती जेभीले यो पुल ठेक्का लिएका थिए । चार वर्षमा सक्ने गरी ३४ करोडमा ठेक्का लिइएको यो पुलमा अहिले पिल्लरबाहेक अरू केही काम भएको छैन ।
७ सय २४ मिटर लम्बाइको पुल २०७२ जेठ मसान्तमा निर्माण सक्नु पर्ने थियो । तर, हालसम्म आधा मात्र काम भएको छ । यो पुलको ठेक्का निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लिएका हुन् । यस्तै, अर्को ठूलो नदी बिरिङको हालत पनि उस्तै छ । एमाले अध्यक्ष ओली निकट निर्माण व्यवसायी मदन अधिकारीको मैनाचुली कन्स्ट्रक्सन र लामा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएका हुन् ।
अधिकारी दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीका श्रीमान् हुन् । ३१९ मिटर लामो पुल निर्माण २०७३ सालमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । २०६८ वैशाखमा १५ करोड ५० लाख ५८ हजारमा ठेक्का लागेको पुल अझै अलपत्र छ । योसँगै हुलाकी राजमार्गमा पर्ने किस्नी खोलाको पुल पनि अझैसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । यद्यपि समय सकिए पनि यो पुलको निर्माण कार्य अहिले भने धमाधम भइरहेको छ ।
यस्तै, गौरीगञ्जको रतुवा, लेहरा, कमल, भुत्नी खोलालगायत खोलाको पुल अलपत्र छ । ओलीले भने रतुवा खोलाको मात्र समस्या देखे । रतुवा खोलामा बनेको पुल नदीको चौडाइभन्दा कम बनेपछि समस्या भएको हो । निर्माण सकिएको भनेर यो पुल ठेकेदार कम्पनीले जिम्मा लगाइसकेको छ । यद्यपि पुल भने खोलाभन्दा सानो छ ।
सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले गौरीगञ्जमा दशैँ, तिहार, छठलगायत पर्वको उपलक्षमा भएको शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रममा भने, ‘चार्डपर्वले सबैलाई सदबृद्धि दियोस् । सबैले सही कुरा बोलुन् ।’ तर, ओली आफैँले केहिबेर अघि गौरादहमा भएको एक कार्यक्रममा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत रतुवा पुल मात्र बन्न बाँकी रहेको भन्दै झुट बोले ।न्युज कारखाना
कार्तिक ८, २०७८ सोमवार १८:२३:१० बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिकारीलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निगमका अध्यक्ष सुशील घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गर्दै अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो ।
यस्तै उक्त बैठकले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा डा। रविन्द्र घिमिरे र सदस्यमा मदन पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कार्तिक ८, २०७८ सोमवार १८:५९:२९ बजे : प्रकाशित
# नेपाल वायुसेवा निगम